ဝါးခယ်မ : မုံရွာကျောင်း ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဇောတမုနိ ၏ ထေရုပ္ပတ္တိ အကျဉ်း
မုံရွာကျောင်း ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဇောတမုနိ ၏ ထေရုပ္ပတ္တိ အကျဉ်း
ဆရာတော် အလောင်းအလျာ ကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တန်.ဆည်မြို.နယ် ညောင်ဇီးကုန်း အုပ်စု ပေါက်တော ရွာ ၌ ခမည်းတော်ဦးစံပြည့် ၊ မယ်တော် ဒေါ်လုံး တို.မှ ၁၂၉၄ ( ခရစ်နှစ် ၁၉၃၂ ) ခုနှစ် ကဆုန်လဆန်း ၁၃ ရက် အင်္ဂါနေ. မနက် ၅း၀၀ နာရီအချိန်တွင် မီးရှုးသန်.စင် ဖွားမြင် ခဲ့ပါသည် ။ ညီအကို မောင်နှမ ခြောက်ဦးတို.တွင် ဆရာတော်သည် စတုတ္ထမြောက် သားရတနာ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ငယ်နာမည် မှာ မောင်ဥာဏ်ပိုင် ဖြစ်ပါသည် ။
၁၃၀၇ ခုနှစ် တပို.တွဲလဆန်း တွင် ခမည်းတော် ၊ မယ်တော်တို.၏ ပစ္စယာနုဂ္ဂဟ ကို ခံယူ၍ ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ ကို ဥပဇ္ဈယ် ပြု၍ ရှင်သာမဏေ အဖြစ်သို.ရောက်ရှိခဲ့သည်
ဆရာတော်သည် ငါးနှစ်အရွယ်မှ စတင်ကာ တန်.ဆည်မြို.နယ် ပေါက်တောကျောင်းဆရာတော်များ ဖြစ်သော ဘဒ္ဒန္တ၀ိစာရ ၊ ဘဒ္ဒန္တသုမန တို.ထံ ၁တန်း ၊ ၂တန်း နှင့် အခြေခံပညာတို.ကိုလည်းကောင်း ၊ တန်.ဆည်မြို.နယ် ရွှေဂူ အရှေ.ကျောင်း ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုမင်္ဂလ တို.ထံတွင် ၃တန်း ၊ ၄တန်း နှင့် ပါဋ္ဌိစာပေ အခြေခံသင်ရိုးတို.ကိုလည်းကောင်း သင်ယူခဲ့ပါသည် ။ ပညာသင်ဘက် သက်ရွယ်တူ ကိုရင် ၁၂ ပါးတွင် အတော်ဆုံး ကိုရင် တစ်ပါးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ခံခဲ့ရသည် ။
၁၃၀၉ ခုနှစ် တန်ခူးလဆန်း ၉ ရက်နေ.တွင် မုံရွာမြို. အရှေ.လယ်တီတိုက် ပထမကျော် ဘဒ္ဒန္တ၀ါယာမ ဆရာတော် ထံရောက်ရှိကာ ဆရာတော့်ထံမှ ပဒရူပ သိဒ္ဓိ နှင့် မာတိကာ ဓါတုကထာ ကျမ်းစာကိုလည်းကောင်း ၊ စာချဆရာတော်များ ဖြစ်ကြသော ဘဒ္ဒန္တမေဃ ၊ ဘဒ္ဒန္တဇောတိက တို.ထံမှ သဒ္ဒါ ၊သဂြိုဟ် ၊ ၀ိနည်း တို.ကိုလည်းကောင်း သင်ယူခဲ့ပြီး ၁၃၁၃ ခုနှစ်တွင် ပထမငယ်တန်းကို ထိုကျောင်းတိုက် မှပင် အောင်မြင်တော် မူခဲ့သည် ။
၁၃၁၃ခုနှစ် ပြာသိုလဆန်း ၁၄ ရက် နေ.တွင် မုံရွာခရိုင် ချောင်းဦးမြို.နယ် ကျီကုန်းကျောင်းဆရာတော် ဦးကောဏ္ဍည ကို ဥပဇ္ဈယ် ပြု၍ ၀ါးခယ်မမြို. မုံရွာကျောင်းတိုက် ဓဏ္ဍသိမိ သိမ် ၌ ရဟန်းလောင်း ၁၂ ပါးကို လေးဆိုင်းခွဲ၍ သိမ်ဝင်ရာ နာဂအမည်ဖြင့် ဆရာတော်များ၏ ဓမ္မာနုဂ္ဂဟ ဖြင့်လည်းကောင်း ၊ ရဟန်းအမ ၁၂ ပါးအနက် ၀ါးခယ်မမြို. မြူရုံးလမ်း ရွှေတောင်လဘက်ခြောက် ကုန်သည် ဦးတင်ဖေ - ဒေါ်မြသန်း ( ဦးအောင်ဇင် ၏ မိဘများ - ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းရှေ.) တို.၏ ပစ္စယာနုဂ္ဂဟ ဖြင့်လည်းကောင်း ရဟန်းအဖြစ်သို. ရောက်ရှိခဲ့ပါသည် ။
ထို ၁၃၁၃ ခုနှစ်တွင်ပင် ၀ါးခယ်မမြို. မုံရွာကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပညာဝံသ ဆရာတော်ထံ ယမိုက် ၁၀ ကျမ်း ၊ ပဋ္ဌန်း ၊ အလင်္ကာ ၊ ဆန်း ၊ ပါတိမောက်တို.ကို သင်ယူခဲ့ရာ ၁၃၁၅ ခုနှစ်တွင် မုံရွာကျောင်းတိုက် မှ ပထမလတ် တန်း ကိုအောင်မြင်တော် မူခဲ့ပါသည် ။
၁၃၁၆ ခုနှစ် ကုန်ခါနီးတွင် မန္တလေးမြို. အနောက်ပြင် မေဃ၀တီ တောင်သမန် တုလွတ်ရန်ရှောင် ကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတိလောက ထံ မှ ပထမကြီးတန်း စာပေများကို လေ့လာသင်ယူကာ ထိုကျောင်းတွင် ပထမကြီးတန်း အောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါသည် ။
၁၃၁၈ ခုနှစ်တွင် တောင်သမန် တိုက် ပုသိမ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တရေ၀တ ၊ နန်းတော်ကျွန်းဆရာတော် နှင့် ဆရာတော် ဦးကေသ၀ တို.ထံတွင် စာချတန်း စာဝါများကို ၁၀ါအတွင်းသင်ယူနိုင်ခဲ့ပါသည် ။ထိုသို.သင်ယူနေစဉ် ငယ်ဆရာတော် ရွှေဂူ အရှေ.ကျောင်းဦးသုမင်္ဂလ ၏အမိန်.အရ ရပ်ရွာ ဇာတိ ကျောင်းအပျက်ကို ပြုပြင်ကာ ငါးနှစ်လုံးလုံး ကျောင်းသစ်ဆောက်ခြင်း ၊ ဘက ပညာရေး ကိုထောက်ကူသင်ကြားပေးခြင်းတို.ဖြင့် ဆရာ.အမိန်.နာခံကာကျေးဇူးဆပ်ရင်း သာသနာပြုနေခဲ့ပါသည် ။
၁၃၂၃ တန်ဆောင်မုန်း လတွင် ၀ါးခယ်မမြို. မှ ရဟန်း ဒါယကာ ၊ ဒါယကာမတို.က ပညာရေးကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါရန် တောင်းဆိုပူဆာ မှုကြောင့် ၀ါးခယ်မမြို. မုံရွာကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဦးပညာဝံသ ထံ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည် ။ သို.သော် ဆရာတော် ဦးပညာဝံသ ၏ တာဝန်ပေးမှု အရ တစ်နေ.လျှင် စါဝါ သုံးဝါ ပို.ချနေရသဖြင့် စာချတန်းစာပေများကို ဆက်လက်လေ့လာသင်ယူနိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါ ။ ထိုစာဝါပို.ချမှုကို ၁၃၂၃ မှ ၁၃၄၅ အထိ ၂၂ နှစ်တိုင်တိုင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည် ။
ဆရာတော်သည် ၀ါးခယ်မမြို. မုံရွာကျောင်းတိုက် တွင် စာချဆရာတော် ၊ တိုက်အုပ်ဆရာတော် ၊ ထို.နောက် ပဓါန နာယက ဆရာတော် အဖြစ် သီတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူခဲ့ပါသည် ။ ၀ါးခယ်မမြို.နယ် သာသနာရေးဆိုင်ရာ ၀ိနစ္ဆယ များ နှင့် ပညာရေး ကဏ္ဍတို.တွင် အကြံပေးခြင်း ၊ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးတော် မူခဲ့ပါသည် ။.၀ါးခယ်မမြို. မြန်မာအဘိဓါန် ကော်မရှင် အဖွဲ.တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဝေါဟာရပေါင်း ၆၀၀၀-၇၀၀၀ ခန်. ပေးပို.တော်မူခဲ့ပါသည် ။
ဆရာတော်သည် ၁၃၈၀ နယုန်လပြည့်ကျော် ၁၀ ရက် ( ၈ - ၆ - ၂၀၁၈ ) မနက် ၆း၀၀ နာရီအချိန် သက်တော် ၈၇ နှစ် သိက္ခာတော် ၆၇ ၀ါ အရတွင် ဘ၀နတ်ထံ ပျံလွန်တော် မူခဲ့ပါသည် ။
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 4:43 PM
Labels: ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း တစ်စေ.တစ်စောင်း